Gịnị bụ Site Linux?
Site na Linux (aka <° Linux) bu saiti raara nye isiokwu metutara ngwanro y teknụzụ efu. Ebumnuche anyị abụghị naanị inye ndị ọrụ niile na-amalite n'ụwa GNU / Linux, ebe ị pụrụ inweta ihe ọmụma ọhụụ n’ụzọ kachasị mfe ma dị mfe nghọta.
Dika akuku nke ntinye anyi nye uwa nke Linux na Software efu, na DesdeLinux anyi abuola ndi ozo Freewith 2018 otu n'ime ihe kachasị mkpa dị na ngalaba na Spain.
The Site Linux nchịkọta otu mejupụtara otu ìgwè nke ndị ọkachamara na GNU / Linux, ngwaike, nchekwa kọmputa na nchịkwa netwọkụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso n’otu otu, ị nwere ike zitere anyị fọm a ka ị bụrụ onye ndezi.
Ndabere onye ọrụ Linux nwere agụụ maka teknụzụ ọhụrụ, gamer na Linux na obi. Amụtawo m, jiri, kesara, nwee obi ụtọ ma taa ahụhụ kemgbe 2009 na Linux, site na nsogbu ndị dabere na ya, ụjọ kernel, mkpuchi ojii na anya mmiri na mkpokọta kernel, ha niile nwere ebumnuche mmụta? Kemgbe ahụ m rụọ ọrụ, nwalere ma kwado ọtụtụ nkesa nke ọkacha mmasị m bụ Arch Linux na-eso Fedora na openSUSE. Obi abụọ adịghị ya na Linux bụ nnukwu mmetụta na mkpebi metụtara agụmakwụkwọ na ndụ m ọrụ ebe ọ bụ n'ihi Linux ka masịrị m ma ugbu a ana m aga ụwa nke mmemme.
Linux Post Wụnye
Site mgbe m dị obere, ahụrụ m teknụzụ n'anya, ọkachasị ihe metụtara kọmputa na sistemu arụmọrụ ha. Ma ihe karịrị afọ 15 adabala m n'anya na GNU / Linux, yana ihe niile metụtara Free na Open Source Software. Maka ihe a na ndị ọzọ, taa, dị ka Injinia Kọmputa na ọkachamara nwere asambodo mba ụwa na Linux Operating Systems, m na-ede na agụụ na ọtụtụ afọ ugbu a, na webụsaịtị a magburu onwe ya a ma ama bụ DesdeLinux. N'ime ya, a na m ekekọrịta gị kwa ụbọchị, ọtụtụ n'ime ihe m na-amụta site na isiokwu bara uru ma baa uru.
Ọchịchọ m nwere maka ihe owuwu kọmputa emeela ka m nyochaa akwa ahụ na-enweghị ike ịkọwa nkewa: sistemụ arụmọrụ. Na a pụrụ iche ahuhu maka Unix na Linux ụdị. Ọ bụ ya mere m ji jiri ọtụtụ afọ mara GNU / Linux, na-enweta ahụmịhe na-arụ ọrụ dị ka enyemaka na inye ndụmọdụ na teknụzụ na-akwụghị ụgwọ maka ụlọ ọrụ, na-arụkọ ọrụ n'ọtụtụ ngwanrọ ngwanrọ na obodo, yana ide ọtụtụ puku ederede maka dijitalụ dị iche iche. mgbasa ozi ọkachamara na Open Source. Jiri otu ebumnuche mgbe niile: ịghara ịkwụsị ịmụ ihe.
N'anya nke Free Software na ụwa nke mmemme. Amalitere m na Linux ụwa site na nkesa Mandrake 7 na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 ka e mesịrị, m ka nọ n'ụwa a na-anwa ime obere oge m. Kemgbe ahụ, ọ bụghị naanị na enwetara m akara ugo na-eji Software efu mana emeela m ọtụtụ isiokwu na nkuzi na ya.
Amalitere m njem na Linux na 2007, kemgbe ọtụtụ afọ m gafere na nkesa na-adịghị agwụ agwụ, ahụrụ m ọtụtụ n'ime ha amụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ nwụrụ, ọ bụrụ na ọ bụ gbasara mmasị onwe m ka m ga-ahọrọ ArchLinux na Debian over ọ bụla ọzọ. Arụrụ m ọrụ ọkachamara ruo ọtụtụ afọ dịka onye nchịkwa nke netwọkụ na sistemụ UNIX, yana onye nrụpụta web nke azịza maka ndị ahịa.
Enwere m mmasị imikpu onwe m n'ụwa nke Linux, ọkachamara na ojiji nke distros ya, ọkachasị ndị ezubere maka azụmaahịa. Nnwere onwe nke Usoro ahụ dabara adaba na uto nke nzukọ. Ọ bụ ya mere Linux bụ sistemụ enweghị ike ịnọ na ụbọchị m kwa ụbọchị.
Onye Mmemme nke Linux na nkesa ya, nke mere na ọ ghọwo ihe dị mkpa maka ụbọchị m taa. Mgbe obula ihe omuma ohuru nke Linux putara, enweghi m ike ichere ogologo oge iji nwalee ya, ma mata ya nke oma.